कसरी सम्पन्न-समृद्ध बन्यो जापान ?
घटना र विचार, न्युज डेस्क !5months ago June 15, 2019
जापान भन्नेवित्तिकै जो-कसैको मनमा एउटा विकसित देश भन्ने चित्र पैदा हुन पुग्छ । संसारका हरेक सचेतजनको मानसपटलमा यस्तै भाव बसेको छ। आखिर कसरी र किन भयो त जापान यस्तो विकशित, सम्पन्न या समृद्धशाली देश ?
जापानमा रहेर बुझ्दा यहाँका मेहनती र इमान्दार जनताकै कारण जापान आज यस्तो सम्पन्न मुलुक बन्न सफल भएको रहेछ। यहाँ खासगरी समयलाई निकै महत्व दिनु नै जापानको प्रगतिको कारणभन्दा पनि हुन्छ। जापानका जनता अनुशासनमा रहनु पनि हरेक प्रगतिको अर्को पाटो भएको अनुभूति हुन्छ ।
टाउको झुकाएर आदर गर्नु, ठूलो सानोको भेदभाव नराख्नु, सधैँ मुहारमा मुस्कान राख्नु, झैझगडा नगर्नु, चर्को स्वरले समेत नबोल्नु यहाँको संस्कार वा संस्कृति नै बनेको छ । जापानमा यात्रा गर्दा कुनैपनि सार्वजनिक साधनमा यात्रु बोलेको होहल्ला गरेको सुन्न पाईंदैन । कसैलाई आफ्नो कारणले समस्या नपरोस् भनेर सबै सचेत रहेका हुन्छन् ।
जापानमा ८० हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेका छन्। सुरुमा जापान आउँदा केही अप्ठ्यारो महसुस गर्नु स्वभाविकै हो। तर पछि यहाँको नियम कानुन सबै बुझेपछि निकै सहज हुने गरेको भुक्तभोगी नेपालीहरु बताउँछन्।
लामो समयदेखि जापान रहँदै आएका दाङका दिलबहादुर बस्नेत पैसाको कुरा गर्दा कसैले धेरै कमाउलान् कसैले थोरै कमाउलान् तर समयको महत्व र श्रमको सम्मान बारे बुझेर नेपाल जानेछन् भन्दै आफूले २२ वर्षदेखि जापानलाई कर्मभूमि बनाउँदै आएको बताउँछन् । जापानमा बस्ने नेपालीहरुले कुनै पनि नेपालीको चाडपर्व रीतिरिवाज नबिर्सी मनाउँदै आएको उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् । र, आफू मात्र नभई जापानमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु सधै नेपाली-मन लिएर बस्ने गरेको देख्दा नेपाली हुनुमा निकै नै गर्व महसुस हुने पनि उनले बताए ।
दिलबहादुर त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यहाँ रहेका प्रायः सबै नेपालीको बुझाई अनि धारणा यस्तै नै रहेको पाइन्छ । जापान रही परिश्रम गरेर धन आर्जन गर्नु आफ्नै ठाउँमा छ, यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ यहाँका नागरिकबाट समय, अनुशासन, आदर, व्यवहार र परिश्रमको महत्व बुझ्न पाउनु र स्वदेश फर्केर त्यो गुण अवलम्बन गर्ने सोच बनाउन सक्नु नै अमूल्य आर्जन हो ।